कोरोना र शिक्षापरीक्षार्थी - Rajdhani Daily News
Home बिचार कोरोना र शिक्षापरीक्षार्थी
कोरोना र शिक्षापरीक्षार्थी
प्यारा विद्यालय शिक्षापरीक्षा स्थगनको कथा, व्यथा वा हौसलाको अवस्थामा रहेका भाइबहिनीहरू ! यस वर्षको एसईई चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन हुँदै थियो । सरकारले एक्कासी एक दिनअघि चैत्र ५ गते कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिमबाट सुरक्षित हुनुपर्ने भन्दै परीक्षा अनिश्चित कालका लागि स्थगित ग¥यो । यस अनिश्चितकालीन भनिएको परीक्षाले तिमीहरूमा अवश्य पनि मानसिक तनाव वा उतारचढाव थपिएको छ । परीक्षाको तयारीमा जुटेका तिमीलाई एक्कासी परीक्षा नहुने खबरले बेचैन बनाउनु स्वाभाविक हो । अझै दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले ६ गतेको परीक्षा दिनका लागि घण्टांैसम्म हिँडेर परीक्षा केन्द्रमा पुगी डेरा खोजी तयारीको अवस्थामा रहेको समयमा एक्कासी परीक्षा रोकिएको खबरले छाँगाबाट खसेजस्तो महसुस भयो होला ।
नेपालमा अझै पनि कतिपय दुर्गम ठाउँमा सहज सञ्चारको सुविधाबाट वञ्चित छन् । ती दुर्गम सञ्चारको सहज उपलब्धता नभएका ठाउँका परीक्षार्थीले त परीक्षा हल अगाडि पुगेपछि मात्र खबर पाएको कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा आयो । यसरी हेर्दा सरकारले स्थगित गर्ने नै भए एक, दुई दिन अगाडि नै गरेको भए सबैलाई सहज हुने कुरा उठ्नु अस्वाभाविक होइन । तथापि, सरकारले ढिलै भए पनि एसईई परीक्षा स्थगन गरेर दूरदृष्टि राखेको भन्नेको संख्या धेरै छ । हामीले पनि यही मतलाई सहजरूपमा अनुसरण गर्नुपर्छ ।
प्रिय विद्यार्थी ! यस वर्ष तिमीहरू ४ लाख ६६ हजार ९७ ले विद्यालय शिक्षा परीक्षामा सहभागी हुँदै छौं । अहिलेको परीक्षामा जुटिरहेका तिमीहरू देशको भविष्यका सक्षम जनशक्ति बन्ने योद्घा हौ । पूर्वीय दर्शनको ज्ञानको भण्डार गीतामा जे भयो ठीकै भयो, जे हुँदै छ ठीकै हुँदै छ र जे हुनेछ, त्यो पनि ठीकै हुनेछ भनिएको छ । वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा गीताको दर्शनलाई अनुसरण गर्दै आगामी परीक्षाको लागि अझैं राम्रो गर्ने मनसायका साथ जुट्नको विकल्प छैन । यो समयलाई अत्यधिक प्रयोग गरी आफ्नै घर वा आवासमा सेल्फक्वारेन्टाइनको अवस्थामा लेखपढ गर्ने समय आएको छ । अहिले कोरोना भाइरसले विश्व थर्कमान भएको छ । नेपालभन्दा अत्यन्त विकसित देशमा यस रोगबाट धेरै संख्यामा हताहत भएको खबर प्रत्येक दिन आउने गरेका छन् । विश्व समुदायको कोरोनाविरुद्घ लडाइँको सन्देशले राज्यलगायत हामीहरू सचेत हुन जरुरी छ । यस सन्दर्भमा सरकारले गरेको निर्णयलाई सकारात्मक तरिकाले नै बुझौं । धैर्य राखौं । परीक्षाको प्रतीक्षा गरौं ।
विश्व समुदायको कोरोनाविरुद्घ लडाइँको सन्देशले राज्यलगायत हामीहरू सचेत हुन जरुरी छ
बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भनेझैं विद्यार्थी जीवनको अध्ययन, लगनशीलता एवं व्यवहार निर्माणलगायतका गुणहरूको आधारमा उसको भविष्यको बाटो निर्धारण हुन्छ । केही अपवादबाहेक विद्यार्थी जीवनका असल विद्यार्थीहरू नै भविष्यका वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, प्राध्यापक, लेखक वा हरेक क्षेत्रका सक्षम जनशक्ति हुने भएकाले आजको परिस्थितिलाई सकारात्मक तरिकाले ग्रहण गरी सिकाइमा रहेका कमीकमजोरीलाई राम्ररी अध्ययन एवं अभ्यास गरी एसईई परीक्षाको तयारीमा निरन्तर लागिरहनुपर्छ । सरकारले शैक्षिक क्यालेन्डरमा फरक नपर्नेगरी परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन एवं भर्ना प्रक्रियालाई सञ्चालन गरिने भनेको छ । यस सन्दर्भमा हामीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा विचलित हुनपर्ने कुनै कारण छैन । बरु कोरोनाको प्रभावले गर्दा पाएको थप समयको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यमा लाग्नु नै बुद्घिमानी हुनेछ । नबुझेका कुरालाई बुभ्mने, लेख्ने, अभ्यास गर्ने र आत्मविश्वास बढाउने अवसरका रूपमा अबको समयलाई उपयोग गरौं ।
पाठ्यपुस्तकभित्रको सीमित ज्ञानबाट बाहिर आएर बौद्घिक क्षमताको विकास पनि विद्यार्थी जीवनबाट नैे सुरुआत गर्नुपर्छ । यसका लागि रेफरेन्स पुस्तकको अध्ययन गर्दा विषयवस्तुको ज्ञान र लेखन सीपको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ । विद्यार्थी जीवनलाई सुनौलो भविष्यको जग भन्ने गरिन्छ । भनिन्छ, जग जति बलियो हुन्छ, त्यति नै घर बढी टिकाउ हुन्छ । विद्यर्थी जीवन पनि मानव जीवनको जग भएकोले यो समयलाई आफ्नो पढाइको आधार बलियो बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गरौं । पढाइ र समयको महŒवलाई बुझांै ।
प्यारा भाइबहिनीहरू ! हरेक मानिसले अनुभव गर्ने १३ वर्षदेखि १९ वर्षको किशोरावस्था भनेको अत्यन्त चञ्चल एवं उत्साहित हुने समय हो । किशोर अवस्थाको लगनशीलता, संयमता, आचरण तथा व्यवहार निर्माणको आधारमा हरेक व्यक्तिले भविष्यको व्यक्तित्व निर्धारण गर्छ । तिमीहरू अहिले यही किशोर अवस्थामा जीवनका सुन्दर पलहरू बिताइरहेका छौं । यो अवस्थामा किशोर किशोरीले आपूmले सोचेबमोजिम हरेक कुराको प्राप्ति होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले मनोविद् स्टेन हालले मानिसको किशोर अवस्थालाई बल र तुफानको अवस्था भनेका छन् ।
मनोविद्काअनुसार यो उमेरमा किशोरीकशोरीलाई हरेक कुरा अनिश्चित लाग्ने, द्विविधा हुने, वास्तविकता बुभ्mन कठीन हुने भएकाले उनीहरूको मानसकितामा उच्च संवेग हुन्छ भन्ने छ । मनोविद्का अनुसार मानिस २१ वर्षको उमेर नपुगुन्जेल उल्लिखित उतारचढाव खुसी, निराश र उत्तेजनाले पिरोलिरहने भएकाले तिमीहरूले आपूmलाई नियन्त्रण गरी तुफानी उमेरमाथि विजय पनि गर्नुपर्छ । यो उमेर समूहका तिमीलाई अहिलेको परीक्षाको स्थगनले अवश्य पनि विचलित बनाएको छ । के होला ? कसो होला ? परीक्षा कहिले हुने होला ? सरहरूले पढाएका कुराहरू बिर्सँदै पो गइने हो कि ? एउटै कुरा कति पटक पढिरहने ? आदिइत्यादि कुराले हैरान भएका पनि छौ होला । तथापि, अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले धकेलिएको परीक्षा तिमीहरूको लागि असल नतिजा ल्याउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले आफ्ना सम्पूर्ण चाहनालाई बन्दी बनाएर भविष्यको जग बनाउने कार्यमा लाग्नको लागि सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
स्वअध्ययन गरेर मात्र विद्यार्थीले आफ्नो जीवनलाई सुनौलो भविष्यतर्फ डो-याउन सक्छन्
अहिले समय बदलिएको छ । विद्यार्थीलाई भुलाउने विभिन्न प्रकारका मनोरञ्जनका साधन उपलब्ध छन् । विशेष गरेर सहरी क्षेत्रका विद्यार्थीले इन्टरनेट, फेसबुक कम्प्युटर र यसबाट सञ्चालित विभिन्न मनोरञ्जनका कार्यक्रमले किशोर अवस्थाको कलिलो मन मष्तिस्कलाई चुम्बकले फलामलाई तानेजस्तै आकर्षण गरिरहेको हुन्छ । किशोर किशोरी इन्टरनेटका वेभसाइटहरूमा राखिने अश्लील तस्बिर हेर्ने, अश्लील भिडियो हेर्नेलगायत यौनजन्य कौतहलताले सताइएका हुन सक्छन् । रहर र जिज्ञासाले भरिएको किशोरावस्थामा अश्लील तस्बिर र यौन मनोविज्ञानले बालमस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव परेको बालमनोविज्ञको बुझाइ छ । यस सन्दर्भमा एकातिर विद्यार्थी स्वयं सचेत भई पढाइमा लाग्न जरुरी छ भने अर्कोतिर अभिभावकले पनि उनीहरूलाई कुलतबाट बचाउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
विद्यार्थी जीवन मानव जीवनको स्वर्णिम बिहानी हो । बिहानीले दिउँसोको संकेतगर्छ भनेझैं विद्यार्थीरूपी जीवनको बिहानी नै असल भएनभने आउने समय पनि असल हुन कठिन हुन्छ । शिक्षाविद् पेस्तालोजीले विद्यार्थीले पढ्न र सिक्नका लागि आफ्नै तत्परता चाहिन्छ भन्ने धारणा राखेका छन् । यसरी हेर्दा विद्यार्थीले स्वयं मिहेनत नगरी अरूको भरपर्ने बानीले स्तरीय सिकाइ सम्भव हुँदैन । यसर्थ विद्यार्थीले स्वअध्ययन गरेर मात्र आफ्नो जीवनलाई सुनौलो भविष्यतर्फ डो¥याउन सक्छन् । आजको विषम परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा ग्रहण गरी सफल भविष्यका लागि अहिलेको समयलाई आउने परीक्षाका लागि केन्द्रित गरी धैर्यताका साथ पढाइलेखाइमा ध्यान दिनु नै भविष्य निर्माणको बाटोमा लाग्नु हो । त्यसैले विश्व जगतलाई आतंकित बनाइरहेको कोरोनाका कारण पछाडि धकेलिएको परीक्षाको समय सबै विद्यार्थीको लागि उर्वर बन्न सकोस् ।